Gbochie ọnya mmiri ịbụ nnukwu nsogbu na Lyric W1 | Akụkọ akụrụngwa
Gbochie oke mmiri ghara ịbụ nnukwu nsogbu na Lyric W1
Ignacio Sala | | Ngwa, Mobiles
Ngwaọrụ dị mma na-eji nwayọ abịa n'ụlọ anyị ka ọ bụrụ mmewere ọzọ anyị ga - eji na - emekọrịta: bọlb ọkụ, mkpọchi, igwefoto, igwe okwu ... mana anaghị amanye anyị mgbe niile iso ha na-emekọrịta ihe mgbe niile. Ngwaọrụ dị iche iche na-enyekwa anyị ohere ijikwa ihe dị iche iche nke ụlọ anyị oge niile, dị ka mkpuchi mbata, mmiri mmiri, ike ọkụ, ọkụ ọkụ ...
Dabere n'ụdị igwe smart anyị arụnyela n'ụlọ anyị, anyị nwere ike ịhazi ha ka ha wee zitere anyị ọkwa mgbe ihe dị mkpa mere n'ezie. Taa, anyị na-ekwu okwu banyere Lyric W1, ngwaọrụ dị nro na ga-adọ anyị aka na ntị oge niile mgbe mmiri na-apụta ma ọ bụ na-achọpụta mmiri oyi nke ọ bụla n'ime ihe ndị a hụrụ n'ime ya.
N'ihi Lyric W1 anyị nwere ike anata ozugbo na ama anyị Ọ bụrụ na mmiri dị na igwe ịsa ahụ agbafuola, ihe dịkarịsịrị njọ, ọ bụrụ na enwere mmiri mmiri na-ejupụta n'ala na ihe egwu nke ọ ga-agwụ na agbata obi, ọ bụrụ na ngwa nju oyi / friza anyị amalitela ịkpo karịa ihe dị mkpa, ma ọ bụrụ na ọkpọkọ na-amalite ifriizi n'ihi oyi n'èzí ...
1 Otú Lyric W1 si arụ ọrụ
2 Ma ọkwa na mobile
3 Ndụ batrị
4 Mmekọrịta na usoro akpaaka
5 Ikwunye na kpọọ
7 Ọnụahịa na nnweta
Otú Lyric W1 si arụ ọrụ
Lyric W1 na-achọpụta site na ngwaọrụ ọ bụla mmiri mmiri ma ọ bụ kefriza ebe ngwaọrụ dị, ma ọ bụ na anyị nwere ike gbasaa nchọpụta dịgasị iche na ekele maka eriri nchọpụta agụnyere na ngwaọrụ ọ bụla, dịka ọmụmaatụ, ịtụkwasị ya n'ala ebe igwe na-asa akwa, draya draịja, asacha efere ...
Lyric W1 na-arụ ọrụ na batrị na-enweghị eriri, yabụ na ọ achọghị njikọ na ọkụ eletrik ma nye anyị ohere edebe ya ebe ọ bụla n'ime ụlọ ahụ nke nwere ike ịnweta mmiri ma ọ bụ ọkpọkọ. N'ime ngwa ahụ nke na-enye anyị ohere ijikwa ma jikwaa ngwaọrụ ahụ, anyị nwere ike ịnweta akụkọ ngosi ngosi, nke anyị nwere ike ịhụ mgbe akpalitere mkpu na mgbe a kwụsịrị / achọpụta ya.
Ma ọkwa na mobile
Lyric W1 bụ ngwaọrụ arụnyere na-enye anyị udo zuru oke ma anyị ga-echeta na anyị jikọtara ya mgbe mkpu dara. Ngwaọrụ a na - ejikọ netwọk Wi-Fi nke ụlọ anyị, na site na ya Ọ na-ezitere anyị ọkwa na mkpanaka ahụ mgbe nchọpụta mere. Na mgbakwunye, a na-emekwa ọkwa site na email, ka anyị wee mara mgbe niile ma ọ bụrụ na anyị ga-eme ka onye otu ezinụlọ ma ọ bụ onye agbata obi gị bata n’ụlọ anyị.
Ọ bụrụ na anyị gaa njem ruo ụbọchị ole na ole, ọ ga-abụ na anyị kwụpụ kpamkpam, site na ngwa n'onwe anyị, anyị nwere ike hazie ya ka gwa ndị nwere isi ihe na adres anyị, nke mere na ha biara ngwa ngwa ma gbalịa idozi nsogbu ahụ. Mana ọ bụghị naanị na-ezitere anyị ọkwa maka mkpanaka ahụ, kamakwa na-enye ịdọ aka ná ntị na-adọrọ adọrọ nke 100db, iji gwa anyị ma ọ bụrụ na anyị nọ n'ụlọ, ebe n'oge a na-adịghị ahụkebe anyị na-eji ekwentị anyị mgbe niile.
Otu uru nke Lyric W1 na-enye anyị bụ na ọrụ ya sitere na batrị, nke na-enye anyị ohere itinye ya n'akụkụ ọ bụla nke ụlọ ahụ, ebe o doro anya na njikọ intaneti abịarute. Ndụ batrị nke ngwaọrụ a bụ afọ 3, site na ngwa mkpanaka n'onwe ya, anyị nwere ike ịlele ọkwa batrị ma ọ bụ nata ọkwa mgbe ọ dị na ọkwa dị oke egwu ma anyị ga-aga n'ihu ịgbanwe ya.
Mmekọrịta na usoro akpaaka
Mana ọ bụrụ na nhọrọ ịdọ aka na ntị nke Lyric W1 nyere dị ka nke gị, ekele maka usoro akpaaka IFTTT anyị nwere ike ịmepụta ihe ngosi anyị site na usoro nri, ka anyị wee, dịka ọmụmaatụ agba nke Philips Hue smart bulbs dị iche ma ọ bụrụ na achọpụtara nrịba ma ọ bụ achọta ihe nwere ike ibute oyi.
Ikwunye na kpọọ
N'adịghị ka ụdị smart ngwaọrụ ndị ọzọ, Lyric W1 achọghị enweghị akwa iji jikọọ na ịntanetị ma nwee ike ịmekọrịta ya. Site na ngwa ahụ n'onwe anyị, anyị nwere ike ịnweta ngwaọrụ ozugbo ma jikwaa ozi niile ọ na-enye anyị. Lyric W1, na mgbakwunye na ịchọpụta nsị, na-agwa anyị banyere ọnọdụ okpomọkụ nke mpaghara ebe ọ dị yana iru mmiri.
Lyric W1 nwere obere akụkụ, 8 cm x 8 cm x 3 cm, nke kwe ka anyị tinye ya ihe ọ bụla. Azụ ngwaọrụ ahụ, nke ị na-etinye ngwaọrụ ahụ na ebe iru mmiri na ihe mmetụta okpomọkụ dị, bụ nke roba ma chebe ngwaọrụ ahụ n'ụzọ zuru oke megide nkwụsị mmiri mmiri, ọ gwụla ma ndị a bụ n'ihi ọkpọkọ gbawara agbawa na mmiri na-apụta n'okpuru nsogbu.
Honeywell's Lyric W1 dị site na Amazon na ọnụahịa nke euro 79, ọnụahịa karịrị ọnụ ahịa maka ngwaọrụ nwere ike inyere anyị aka izere ihe ọjọọ ka ukwuu n'ụlọ anyị. N'iburu n'uche na mmiri mmiri nwere ike were ya ọ bụghị naanị ihe ncheta kachasị dị oke ọnụ, kamakwa ọ na-emebi ụlọ anyị, Lyric W1 nke Honeywell karịrị ka akwadoro, ọbụghị naanị maka ụlọ anyị, ma ọ bụrụkwa na anyị nwere ụlọ nke abụọ, ụlọ obibi ndị anyị na-anaghị agakarị kwa ọnwa.
Honeywell Lyric W1 - Wi-Fi Mmiri mmiri na Onye Nchọpụta oyi, White
Lyric W1 - Mmiri mmiri na mmiri nchọpụta
Nyochaa: Ignacio Sala
Extension USB maka ihihi nchọpụta gụnyere
Ihe ngosi 100dB siri ike
Ngwaọrụ ahụ nwere ike ịdị ntakịrị, mana na-eche na azụ dị nkwadobe maka akụrụngwa iji chọpụta nchapu mgbe echedoro ya, ọkpụrụkpụ ahụ ezuola.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Gbochie oke mmiri ghara ịbụ nnukwu nsogbu na Lyric W1
Njem mbụ na Hyperloop dị nso karịa ka a tụrụ anya ya
"Despacito", nke Luis Fonsi na Daddy Yankee dere, abụworị egwu a kụrụ na akụkọ ihe mere eme